Abacre Cash Register - Main Page
Abacre Indawo yemali
Kuzuzwe ukulawula ngokugcwele kulesi sizukulwane software next indawo yemali!
Top 10 izizathu ukuthenga Abacre Indawo yemali
Abacre Cash Register kuyinto isizukulwane esisha software indawo yemali for Windows. Kuba isixazululo eqolo for iningi ejwayelekile irejista cash imisebenzi. Zokusetshenziswa ukubonwa is ngokucophelela elungiselelwe for high speed uvo of oda a client kanye nokuvinjelwa amaphutha ezivamile. Ukuthi yenzelwe usebenzisa kumakhompyutha multiple, futhi iqukethe amazinga ukugunyazwa onokwethenjelwa evikelekile.
Ukuze izimenenja, kukhona isethi ocebile imibiko ebonisa ukuthi isithombe ephelele cash imisebenzi: yokuthengisa by sikhatsi, amahora lomthwalo high, Z-Out, abasebenzi kunazo esebenzayo, izindlela zokukhokha, futhi othomathikhi kwentela ukubalisisa.
By ekwenzeni yonke inqubo yokuthengisa, isofthiwe kwenza ukusetshenziswa kangcono isikhathi yabasebenzi bakho namandla kakhulu ngcono inzuzo kanye nzuzo kwakho eyayithokala.